စိုင်းစိုင်းလားရှိုး ( ရှင်ရဲထွတ် ): 2008 အလွန် 2009 သို့
2008 အလွန် 2009 သို့
Wednesday, December 31, 2008 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 4:55 PM
မကြာတော့မယ့် အချိန်အတွင်းမှာ 2008 ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကို ရောက်ရှိလာပါတော့မယ်။ တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ 2009 ကိုချဉ်းနင်း ၀င်ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အချိန်ခါ သမယကို တော်တော်များများက နှစ်သစ်ကူးကို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ တွေကျင်းပပြီး 11း59- 59 ကိုရင်ခုံစွာ မျှော်လင့် ကြိုဆိုတတ်ကြတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အရင်နှစ်တွေမှာ အဲဒီလို စိတ်ကူး၊ အဲဒီလို ပျော်ပွဲတွေကို ခုံမင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ကျွန်တော်ရဲ့ ခုလက်ရှိနေရာ ဒေသ တိုင်းပြည်က ဆိုရင် ပိုလို့တောင်ပျော်လို့ ရွှင်လို့ကောင်းပါတယ်။ ပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် စိတ်မပါဘူးဗျ။ ဒီနှစ်ကြမှ စိတ်တွေက တစ်မျိုးပဲ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုချင်တဲ့ ပုံစံက တစ်မျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အတွေးလေးနဲ့ပဲ နှစ်သစ်ကို ဖြတ်ကျော်ချင်တယ်။
ဘယ်လိုအတွေးမျိုးလည်းဆိုတော့ သူများတွေနဲ့ တူချင်မှတူမယ်၊ ကွဲလွဲရင်လည်း ကွဲလွဲနေမယ်။ 2008 ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကို ရောက်လာလေ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အရာတွေများလာလေပဲ။ 2008 မှာ ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့လည်း ? မေ့ထားသင့်တဲ့ အတိတ်ကို မေ့ထား၊ ပြုပြင်ရမယ့် လုပ်ရပ်ကို ပြုပြင်၊ သယ်ဆောင် လာရမယ့် ကိစ္စတွေ သယ်လာ၊ တွေးစရာတွေ လုပ်စရာတွေ အများကြီးပဲ၊ ဒီတော့ ကျွန်တော် အပြင်ထွက်ပြီး နှစ်သစ်ကို မကြိုတော့ဘူး။
2009 ကိုချဉ်းနင်းဖို့ 2008 ရဲ့ နောက်ဆုံးမိနစ်တွေကို ကျွန်တော် အသန့်ရှင်းဆုံး ဖြတ်ကျော်ချင်တယ်။ 2009 ကို ကျွန်တော် အဖြူစင်ဆုံးကြိုဆိုချင်တယ်။ ကဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ပုံစံမတူတဲ့ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုခြင်း (သို့) နှစ်သစ် ကိုရင်ဆိုင်ခြင်း အတွက် မလွဲမသွေကြုံလာမှာမို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် အားလုံးကို......
ခုလာမယ့် 2009! မှာ အားလုံးသော မောင်နှမများ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။
ဆုပေးတဲ့ ဦးရှင်ကြီးလည်း ထပ်တူ ပြည့်ဝပါစေ... :)
happy new year ပါဗျားမအားတာနဲ့ အခုမှပဲရောက်တာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။
နှစ်သစ်မှာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ--